Vashandi veHurumende Voronga Kuramwa Mabasa Svondo Rinouya
Vashandi vehurumende vati havasi kufara neongororo yemashandisirwo emari yehurumende yepakati pegore yakaturwa mudare reparamende negurukota rezvemari, VaTendai Biti neChitatu.
Naizvozvo, musangano waitwa muHarare nesangano rinomira vashandi vehurumende, reApex Council, wasunga kuti vashandi vacharatidzira kweawa imwe chete muHarare nemusi weChipiri chesvondo rinouya.
Vane ruzivo nezvatora nzvimbo mumusangano uyu vati panga pane kusawirirana pakati penhengo dzesangano iri panzira yekutora, vamwe vachiti vari kuda kuti vashandi vakande mapadza pasi nechimbichimbi, ukuwo vamwe vachiti ngapatange pateverwa nzira dzezvematongerwo enyika, pozotorwa matanho kana izvi zvaramba.
Muna Chivabvu, sangano iri rakanyorera mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, tsamba richikumbira kuti vapindire mugakava remihoro iri, asi hapana danho ravati vatora. Vashandi vari kuda kuti mushandi anotambira mari yepasi pasi atambire mari inoenderana nePoverty Datum Line.
Sachigaro weApex Council, Amai Tendai Chikowore, vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo dzakatsamwa zvikuru nekusaratidza han’ya kwehurumende. Vatiwo nemusi weChina vari kunyorerazve mutungamiri wenyika VaMugabe imwe tsamba yekuda kunzwa pasvika chikumbiro chavo chekuti vapindire mugakava iri.
VaBiti vakazivisa kuti upfumi hwenyika hausi kufamba zvakanaka, nekudaro hahusi kuzokura sezvanga zvakatarisirwa.
Vachitura ongororo yavo iyi, VaBiti vakadzikisa huwandu hwemari yaitarisirwa kushandiswa nenyika gore rino nezvikamu gumi kubva muzana kusvika pa$3.4 billion, vachiti izvi zvakakonzerwa nekushomeka kwemari iri kupinda muhomwe yehurumende.
VaBiti vakachemawo kuti mari yemangoda yaitarisirwa kuderedza matambudziko enyika, haisi kupinda muhomwe yehurumende sezvanga zvichitarisirwa, uye kusanaya zvakanaka kwemvura kwakaderedzawo goho renyika.
Hurongwa uhwu hwakakwidzwawo mitero yepeturu negorosi inobva kunze kwenyika, izvo zvanzi nenyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaProsper Chitambara, zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda, kusanganisira chingwa, ikwirewo.
Mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe, VaJohn Mufukare, vatiwo VaBiti vanga vasina imwe nzira yekutseketudza nayo mashandisirwo emari yehurumende, sezvo vasina mukana wekuwana nawo mari ingadai yasimudza nyika kubva mumatope.
VaMufukare vatiwo kusadhonzera pamwe muhrumende yemubatanidzwa rimwe dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvisafamba sezvanga zvakatarisirwa.
Hurukuro naMai Tendai Chikowore
Hurukuro naVaProsper Chitambara pamwe naVaJohn Mufukare